Oktoobar 23-keeda ha loo aqoonsado usbuuca ololaha caafimaadka ee Puntland – Qore: Liibaan Maxamuud xirsi Cigaal (Raydab), Biomedical Scientist and A.C. Health Advisor. – Radio Daljir
Oktoobar 23-keeda ha loo aqoonsado usbuuca ololaha caafimaadka ee Puntland – Qore: Liibaan Maxamuud xirsi Cigaal (Raydab), Biomedical Scientist and A.C. Health Advisor.
Nofeembar 9, 2010 12:00 b 0
Ku: Ciddii uu khuseeyo,
Waxaan ku bilaabayaa qoraalkaygan, magaca alle waxayna naxariis iyo nabadgalyo ay u sugnaatay rasuulkeenii (SCW).
Qoraalkan waxaan kusoo bandhigi doonaa, hindiso argti, kadib markii ay ii muuqatay baraarug bilaw ah,oo ay muujiyeen wasiiro ay kamid yihiin, wasiirka Caafimaadka iyo wasiirka Waxbarashadda Dawladda Puntland. Waxaa kaloo ii miiquutay in qoraalkan uu dhiiragalin u noqdo iyo taageero inta jecel wax qabadka iyo horumarka Puntland.Waxaa soo if baxay dhawaanahan danbe cariga puntland,waxqabad curdin ah oo ay muujiyeen masuuliyiinta aan kor ku xusay oo u quntay fulinta waajibaadka ka saaran ummaddooda.
Waxaana kaloo ka maqnayn qoraalkan soo bandhigid baahiyadda caafimaad ee ka jira deegaanka kuwaas oo aan la soo koobi karin.ha noqoto kuwo waxqabadkooda aysan awood u lahayn dhakhaatiirta gudaha kunool iyo kuwa gargaarka ku yimaada waqtiyadda qaarkood.Sidaa awgeed waxaa iga soo go`day hindiso iyo aragti looga gudbi karo baahiyadda iyo culeska taagan hada iyo sidii lagu yadheyn lahaa culeyskaas mustaqbalka.
Waxaa soo gaadhay dhawaan taariikhdu markay ahayd(23/10/2010) tiro dhan 18 dhaakhaatiir ah,kuwaas oo ka hawl galay deegaanadda hoos yimaada Puntland.Dhakhaatiirtaas oo u dhalatay wadanka Turkiga.Waxaana la`orankaraa waa markii ugu horeysay ee tiro intaa le`eg ay yimaadaan soomaaliya intii burburka kajiray. Waxayna kabilaabeen deegaanadda puntland sida Gaalkacyo,Burtinle ,Garawe Qardho iyo Boosaaso adeegyo caafimaad oo kala duwan. Bulshaduna ay aad usoo dhaweeyeen wax qabad kaas. Waxayna eegeen dhakhaatiirtaas bukaano gaadhayay 4000(afarkun).Bukaanadaas ilaa shanbobol oo kamid ahi waxaa loo sameeyey, qaliino kala duwan oo qaarkood ay cuslaayeen.
Baahidii Shacabka madhamaan weli?
Hadii aan ku eegno si aqooni ku jirto tiradda dadka ku nool Puntland iyo dhakhaatiirta ka hawl gala deegaanka waa ay kala badan yihiin.idigoo aan hilmaameyn dacdaradda iyo duruufaha haysto soomaaliya guud ahaan.
Sidaa awgeed kama haqab tiri karaan dadaalkii ay bixiyeen dhakhaatiirtii Turkiga ahayd.Dhanka kale hadaad eegtid tiradda ku nool puntland waxaa lagu qiyaasaa 2500,000 (labamilyan iyo shanboqo oo kun), tiradda dhakhaatiirta ka hawlgalana waa 74 (todobatan iyo afar) dhakhtar ah oo qudha!!!
Hadaba halkii dhakhtar ah waxaa saami ugu soo aadaya inuu daweeyo 35000(sodon iyo shan kun)oo kamid ah bulshadda ku nool Puntland.
Waxaa hadaba laga maarmaan ah, in laga baaraan dago, sidii loo heli lahaa adeegyo caafimaad oo dheeri ah oo daboolana baahidda bukaanadda deegaanka kunool .
Baahidda iyo duruufaha waayaha waa in ay ku baraan hindiso aragtiyeed kaas oo ku dhaxalsiiyo deeqsoomi iyo horumar kaas oo u noqdo dhaxal gal jiilalka ina soo haya.hadaba Waxaa iga tala soo jeedin ah in laga faaiidaysto waxtarka laga dhaxlay waxqabadkii 23-octobar ee dhakhaatiirtii Turkidda kaa oo na dhaxalsiinaya in la unko aragti oranaysa ugu yaraan sanad waliba hala asteeyo xili ay dhakhaatiirta gudaha iyo kuwa dibadda kumaqanba ay kulmaan una istaagaan sidii ay u sameyn lahaayeen adeegyo caafimaad oo lamid ah kii ay sameeyeen dhakaatiirtii Turkida si loo yareeyo baahiyadda baaxadda weyn ee caafimaad ee ka jira puntland.
Sidaa awgeed,in lasameeyo isbuuca ololaha caafimaadka ee puntland.Maalintii ay fulinteedda hirgashayna laga dhigaa
(23/10/ )sanad waliba maalin qaran.
Baraarujin iyo baadigoob dhakhaatiir
Waxaan filayaa qof waliba oo muslim ahi waxaa uu garan karaa waajibka ka saaran gargaarka dadka tabaalaysan,dadkaas oo ay maantay ku uruur santay duruufaha waayaha. Waxaadna ka dheehan kartaa wajiyadooda dhibta ay la`ildaran yihiin iyo xanuunadda ay la kufaa dhacayaan. Hadaba waxaa is xusuusin muddan dadkaa duruufaysan ee dalka ku nool waajib intee le`eg ayay ku leeyihiin dhakhaatiirta soomaaliyeed.?jawaabtu waxay ku soo ururaysaa iyadoon shaki ku jirin, inta badan dhakhaatiirta Soomaaliyeed waxay kasoo baxeen jamacadii ummadda Soomaaliyeed, qaarka harsana waxay wax kusoo barteen ama kubartaan hada hanti hooyo iyo aabe soomaaliyeed.Sidaa awgeed waxaa laga maar maan ah in ay gartaan in lagu leeyahay dhakhaatiirta dayn, walina laga dhawrayo .Waxaana waajib aan la dhayalsan karin ku ah inay gudaan dayntaas waajibka ah inta aan la hortagin alle.
Dhakhaatiirta gudaha kunool qaar kamid ahi waxay muujiyeen xilkasnimo iyo inay bixiyaan dayntaas waana ku mahad sanyihiin qaarka harsana waa laga dhawrayaa insha`allaah.Waxaase dib u eegis mudan sidoo kale aaway dawrkii dhakhaatiirtii dibadda ku nooleyd ee deegaanka laga sugayay.?Malaha way hilmaameen dadkoodii misa waxay garan waayeen wixii ay garteen Turkidda.Waxaan filayaa qof waliba oo caqli leh waa uu garankaraa jawaabta .Aniguse waxaan ka eegayaa dhinac kale oo laga yaabo inay cudur daar jilicsan loogu helikaro.Dhakhaatiirtan ku nool dibadda waxay sugayaan halkii laga haggi lahaa oo gudaha dalka ah. !!
Bulshooyinka waxay horumar ku gaadhaan in masuuliyaadka bulshadda u dhaxeeya ay u qayb santahay si ay u fududaato in la ogaado cidda dayacda masuuliyadeeda iyo cidda latimaada wixii loo igmaday ee laga dhawrayay.
Qaybsashadda musuuliyaadka olalaha
1- Dawladda dhankeeda waa in ay ka faaiidaysataa tala soo jeedintan.
2- Dawladda iyo dhakhaatiirta waa in ay tala wadaag ka yeeshaan xiliga ugu haboon ee la heli karo dhakhaatiirta gudaha iyo dibadda.
3- Dawladda waa in ay u fududayso dhakhaatiirta ka imanayso dibadda wixii ay ku hawlgali lahaayeen oo agab ah.
4- Dawladda Sidoo kale waa in ay isbuuca daryeelka caafimaadka hirgalisaa kaas oo noqon doona mid ay kawada qayb qaataan si iskaa wax uqabso ah mujtamaca oo idil .
5- Wasaaradda caafimaadka waa in ay samaysaa barnaamij baraarujin dhakhaatiirta kunool dibadda, isla markaana ay ka shaqeysaa isku xidhka mashruucan olalaha caafimaad iyo dhamaan dhakhaatiirta dibadda ku maqan ee deegaanka.
6- Dhakhaatiirta dawr kooda waxaan filayaa hadii ay ka helaan dawladda inta kaga aadan inaysan daqiiqad dib uga dhaceyn hawshoodda dayntii lagu lahaana ay dhakhsa u bilaabi doonan in ay baxshaan.
Hadaba kubada waa ayna dhax taalaa ee dawladda waa in ay hirgaliso hawsha inta kaga aadan.
MIDNIMADDA IYO WADAJIRKA
Waxaa iga xusid mudan imaanshihii dhakhaatiirtii turkidda waxay u noqotay reer Puntland mid dib u noolaysa wax wada qabsigii bulshadda.waxaa kaloo lagu baraarugay ,wadajirka muhiimadda ay u leedahay daboolidda baahidda bulshadda.
Waxaa sooyaal taariikheedku sheegayaa horumarka lagu gaadho wax wada qabsiga in uu ka mug weyn yahay markii mid mid wax loo qabto.
Deegaanadan puntland waxay ku caan baxeen hab soo jireen ah kaaso qeexaya midnimadda iyo wadashaqaynta in la xoojiyo xiliga loo baahan yahay arintaas oo kale.
HORMUUD KU DAYASHO MUDAN haduusan daalin
Dabeecadda dadka waxaa lagu yaqaan, xiisaha iyo wax dhamaystir la`aanta .Waxaana ay dhacdaa arinta noocaas oo kale marka ay meesha kamaqan tahay xisaabtanka iyo abaalmarinta.Hadaba firfircoonidda ugubka ah ee Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland ay muujisay hormuud kana uu kayahay DR Cali Cabdullahi Warsame waxay mutaysteen in loo tahniyadeeyo.Waxaana kaloo xusid mudan, dhakhaatiirta ka hawlgalla deegaanka oo uu ugu horeeyo Professor Mahamed Jamac shaqaddii ay muujiyeen iyo xilkasnimadoodii, xilli laga yaabo qaar kale inay shaqooyinkooda gaarka ah ay wateen.Waxaana leeyahay dhamaantiin waad mahadsantihiin,. Xadiis ayaana ahaa ninkii aan u mahadin qofkii mutaysta in loo mahadiyo allena uma mahadiyo.
Marag madoonta waxaa noqotay in shacabka soomaaliyeed ee puntland ay u hamuumnaayeen adeegyaddan oo kale. Welina ay taagantahay baahidii laqabay.
Shacabka wuxuu sugayaa waxqabad dhab ah diyaarna waxay u yihiin waxqabadyadda noocaan oo kale ah inay taageeraan sida kamuuqatay wajiyadooda. Shacabkani waxay kasoo bixidoonaan dawrkooda kaga aadan inshaa allaah hadii dib loo hirgaliyo marlabaad ololahan oo kale..Waxay muujiyeen illaalinta nidaankii loo asteeyay iyo soodhawyntii martiddii dhakhaatiirta Turkida ahayd.
Waxaa soo iftiimay ididiilo wada shaqayn xoog leh oo dhaxmarta shacabka soomaaliyeed ee Puntland iyo maamulkooda iyadoo loo baahan yahay in la naaxiyo wada shaqaynta noocaas oo kale ah.Waxaana loo baahan yahay wasaaradaha dawladda iyo hay`adaheeddaba in ay sidoo kale layimaadaan,wax qabad firfircooni ku dheehantahay, dhaxal galna u noqonkara jiilasha danbe. Arintan ugubka ah ee xaga caafimaadka naga soo gashay waxay horseed u noqon kartaa horumarka iyo wada shaqaynta shacabka iyo dawladda hadii lagaarsiiyo meel sare.Waxaana ku soo gabagabeynayaa waa in aysan ku ekaan dhaqdhaqaaqan weli aan saani u socod baran wasaaradda caafimaadka oo kaliya bal waa in ay u gudubtaa saamayna ku yeelataa wasaaradaha kale ee puntland si looga baxo hurgumaha iyo waqtigii dheeraa ee waxqabad yaraantu jirtay. Waa in dhaqdhaqaaqan la xoojiyaa si uu u noqdo shumac horimarineed oo u baxay ummadda reer puntlad lagaadhsiiyana dhamaan ummadda soomaaliyeed .
Qore: Liibaan Maxamuud xirsi Cigaal (Raydab)
Biomedical Scientist and A.C. Health Advisor.
2 weriye oo u kala shaqeeya taleefishinada Universal & Horn Cable oo lagu eedeeyey ku xad gudub anshaxa & shuruucda saxaafadda, iyo faafin warar been ah, shaqo joojinna lagu sameeyey.